Yintoni iConvection (iMozulu)?
Convection kunye neMozulu
Indlela Udlala ngayo Indima ekubangeni uMoya ukuphakama
I-convection lixesha oza kuliva ngokuphindaphindiweyo kwimimeteorology. Kwimozulu, ichaza ukuthutha okutshatyalaliswayo kobushushu nokunyamezela emoyeni , ngokuqhelekileyo ukusuka kwindawo efudumalayo (phezulu) ukuya kwindawo epholileyo (i-aloft).
Nangona igama elithi "convection" ngamanye amaxesha lisetyenziselwa ngokungafani "neendudumo zeendudumo," khumbula ukuba iindudumo zihlobo olulodwa lombonakalo!
Kusuka kwiKokishi Yenu ukuya kuMoya
Ngaphambi kokuba sihlolisise umklamo wezulu, makhe sibone umzekelo onokuba uyazi kakuhle-ibhodlela elibilisa lamanzi.
Xa amanzi amathumba, amanzi ashushu ephantsi kwebhode aphakama phezulu, ekhokelela kumabhule amanzi atyukileyo kwaye ngamanye amaxesha aqhume emanzini. Kuyafana nokuthunyelwa emoyeni ngaphandle komoya (umbane) ubeka endaweni yamanzi.
Amanyathelo kwiNkqubo yeConvection
Inkqubo yokudlulisa iqala ngokuphuma kwelanga kwaye iyaqhubeka ngolu hlobo:
Ilanga lomlilo liwubetha umhlaba, ulitshise.
Njengoko izinga lokushisa lomhlaba libuhlungu, litshisa ulawulo lwomoya ngqo ngaphaya kwalo ngokuqhuba (ukutshatyalaliswa kobushushu kwizinto ezithile ukuya kwelinye).
Ngenxa yokuba izinto ezingenabumba zifana nesihlabathi, iintonga, kunye neentambo ziba zifudumele ngokukhawuleza kunomhlaba ogqutywe ngamanzi okanye izityalo, umoya ojikelezayo kunye nobushushu bubushushu. Ngenxa yoko, ezinye iipokethi zifudumele ngokukhawuleza kunabanye.
Amapokethi okufudumala ngokukhawuleza ayancinci kunomoya opholileyo ojikelezayo kwaye baqala ukuphakama. Le mihlathi ephakanyisiweyo okanye imilambo yomoya ibizwa ngokuba "ngama-thermals." Njengoko umoya uvela, ukufudumala nokunyuka kuthathwa kwenyuka phezulu (vertically) emoyeni. Unamandla okufudumala komhlaba, onamandla kwaye aphakanyise phezulu emoyeni ukuthunyelwa kwegama. (Kungenxa yoko ukuhanjiswa komsebenzi kusebenza ngokuthe ngqo kwihlobo lasehlobo .)
Emva kokuba le nkqubo ephambili yokudlulisa idibeneyo igqityiwe, kukho iinkalo ezininzi ezinokuthi zenzeke, ngamnye owenza uhlobo oluthile lwemozulu. Igama elithi "convective" lisoloko longezwa kwigama labo kuba i-convection "i-jumping" iqala ukuphuhliswa kwayo.
Njengoko ukuqhubela phambili ukuqhubela phambili, umoya uyacubungula njengoko ufikelela kwimpembelelo yomoya ophantsi kwaye unokufikelela kwindawo apho umphunga wamanzi ngaphakathi kwawo uyanciphisa kunye neefom (uqikelele) i- cloud cumulus phezulu!
Ukuba umoya uqulethe ubuninzi bomswakama kwaye ushushu kakhulu, kuya kuqhubeka ukukhula ngokuthe tye kwaye kuya kuba yi-cumulus enkulu okanye i-cumulonimbus.
I-Cumulus, i-cumulus eninzi, iCumulonimbus, kunye nama-Altocumulus Castellanus amafu onke afana neendlela ezibonakalayo zokuhambisa. Yonke imimiselo ye "conistction" esemanzi (i-convection apho umphunga wamanzi ogqithiseleyo emoyeni okhulayo ukwenza ifu). Ikhonkco eyenziwa ngaphandle kokubunjwa kwefu ibizwa ngokuba yi "convection" eyomileyo. (Imizekelo yesigxina esomileyo iquka ukuhanjiswa komzimba okwenzeka kwiintsuku ezinelanga xa umoya oomileyo, okanye ukugqithisa okwenzeka kusenjenjalo ngosuku ngaphambi kokuba ukufudumeza kusomelele ngokwaneleyo ukudala amafu.)
Ukuba amafu afanelekileyo afumane amahlumela efu aneleyo aya kuvelisa imvula. Ngokuphambene nomngcipheko ongekho-convective (okhokelela xa umoya uphakanyiswa ngamandla), ukuchithwa kwemvula kumdinga kudinga ukungazinzi, okanye amandla omoya aqhubeke ekhula ngokwayo. Inxulumene nombane, iindudumo kunye nokugqithisa kwemvula enkulu . (Iziganeko ezingekho phantsi kweemvula zengxowankulu zineemvula ezininzi kakhulu kodwa zihlala ixesha elide kwaye zivelise imvula enkulu.)
Yonke imimoya ephakanyayo ngokusebenzisa i-convection kufuneka ilinganiswe ngokulingana nomlinganiselo olinganayo wokungena kwelinye indawo.
Njengoko umoya ovuthayo uphakamisayo, umoya ovela kwenye indawo uhamba ukuze ubeke endaweni yawo. Sivakala ukuba ukulinganisa ukuhamba kwemoya njengomoya. Imizekelo yemimoya ekhutshelweyo iquka i- foehns kunye neentsholongwane zaselwandle .
I-convection igcina thina abahlali be-Cool Surface
Ngaphandle kokudala iziganeko zemozulu ezikhankanywe apha ngentla, i-convection isebenza enye injongo-isusa ubushushu obushushu emhlabeni. Ngaphandle kwayo, kubalwa ukuba izinga lokushisa lomgangatho womhlaba emhlabeni liza kuba kwindawo engama-125 ° F kunokuba ikhona i-59 ° F. ekhoyo.
Xa iConvection iyeka nini?
Kuphela xa iipokhethi ezifudumeleyo, umoya okhulayo uphahlile ukushisa okufanayo kwomoya ojikelezayo kuya kuyeka ukukhula.
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -cope
Iyiphi iqela lokulawula?
Ngaba iDiet Diet isebenza?
I-Molecular Formula Inkcazo
Ukuphendula kwe-Synthesis kunye nemizekelo
7 Iinkcukacha NgeeVirus
Scuba Diving Safety kunye nezingane
Zingaphi Iindlovu Unokuzibona Ngobusuku?
Ukuqhelaniswa kwemali - Inkcazo, imizekelo kunye noBudlelwane
Inkcazo ehlukeneyo kunye neNkcazo
Iingcebiso eziPhambili kwiCandelo lakho leBiology
Iibhanki kunye neNinzi - I-Architecture phakathi kweeRails
Yiyiphi Intsikelelo yobuThantshi kwaye Ndingayifumana njani enye?
UAlfred Omkhulu Iingcaphuno
Ikhonkco yeConjunction Quiz
Ukudibanisa kukaDar '
Iinkonzo kunye neNgxowa yoLwaphulo lokuFaza (iSohlwayo seNtloko)
Uvavanyo lweDrive: 2008 Ford Mustang GT
I-Biography kaGlenn Murcutt, uMcwangcisi wase-Australia
Isiseko soLwimi lwesiLwimi kwisiTaliyane
Funda indlela iiSayithi eziMmandla kunye neziNdawo eziPhambili ezikhethiweyo
Isikhokelo soMqala kwiSichazi somthi
Igrama yoTshintsho (iTG) Inkcazo kunye nemizekelo
Yintoni iWingspan kwiBhola ibhola?
Ukuhlaziywa kweBridgestone Potenza RE97AS
Isicatshulwa soBomi - i-Biography
Amandla eSiseko seShumi
I-10 ye-Hair Metal Ballads yama-80s
Sketching Ukuzivocavoca: Indlela yokuTyekisa abantu ubuso
Indlela Yokuthengisa Imoto Eyisebenzisiweyo Ngomqondiso kwi Window
Funda malunga neentlobo ze-7 ze-Gymnastics
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uGen Carlos Buell
Itheyibhile yePeriodic of the Elements - Yamkela iMasom Masses
Shemini Atzeret noSimchat Torah
I-Nirvana: Inkululeko ekuBandezelekeni nasekuzalweni kwakhona eBuddhism
Ipropane kunye ne-LPG Conversions